Kepha mina, ngaleso sikhathi ukupheka isobho uju agaric enhlamba. Hhayi ukuthi ababezosinika amakhowe ezazingezinhle nhlobo, umane anosawoti, zifakwe emanzini anosawoti noma okuthosiwe, ngizithanda ngaphezulu. Manje, uma ukubeké ngaphansi into asanda amakhowe noma russula, chanterelles ... Kodwa njengoba besho, okuthandwa kuhluke, ikakhulukazi uma okubhekenwe bantule oluthandwa - okuhle, ukhunta amhlophe kweqiniso wathola kuba nzima kakhulu, futhi umkhuba wethu njalo ukuchitha isikhathi eduze TV noma ikhompyutha ukuze uthole mushroom forays ehlathini iba iphupho ipayipi. Futhi kulokhu sisebenzisa iseluleko owaziwa Arkadiya Raykina, owathi ukuze alungiselele nokudla unogwaja, kudingeka okungenani ube ikati. Esimweni sethu, labo ithengiswe emakethe amakhowe omisiwe bangase bakwazi zisikhumbuza ukunambitheka evamile mushroom isobho.
Ngo yami, ngokuvamile elambile, ingane (abangekho kholwa kumusa wasenganekwaneni kaNkulunkulu eSoviet Union) kwaba isobho uju agaric uju esiyingqayizivele. Thenga ikhilogremu inyama emakethe i ngokwesilinganiso umkhaya yaseSoviet yokuthuthela onjiniyela abasebasha, yini eyayimenyezelwa abazali bami, ngisho nengane encane ngezingalo zakhe ayikwazanga ezingaphezu kuka kabili ngenyanga, futhi ezitolo of emadolobhaneni yesifundazwe kwakungeke isimiso. Bese ephethwe ukupheka ekhishini ohlanganyelwe ngu clubbing ambalwa besifazane isobho imikhiqizo atholakalayo, isinongo eziyisisekelo eziye ngokucophelela kuvuna ngu izihlobo edolobhaneni amakhowe omisiwe, lamahlukuzo ulenga phezu izitofu smoggy ezindlini ngokuhlanganyela. Futhi, nezazi njalo abampofu ke inkulumo-ze abonisana nawo ngendlela enhle ukuthi amakhowe izakhiwo umsoco futhi ukunambitheka akuzona sibi kakhulu kunalokho okuboniswa le tenderloin yenkomo, enezela valve akhethekile Yesifunda City Party. Ngakho-ke, amakhowe ngalezo zinsuku, ngokuvamile ebizwa ngokuthi "inyama abampofu", ukuze abuthele kuzo ehlathini waqhubeka wonke izitolo amabhasi waqasha ngokukhethekile.
Njengoba isikhathi siqhubeka, sengiyahamba ngokuphila kwakhe osizungezile, futhi manje amakhowe ukudla abampofu wathuthela izibiliboco niche njengoba mushroom isobho steel ukupheka izinongo noma champignons kanye oyster amakhowe kwanda isimo yokufakelwa. Manje uju isobho agaric kungenziwa kuphekwe, bagijima ibe ugogo kaNkulunkulu dandelion, ngokudayisa amakhowe omisiwe endaweni ethile lisendleleni noma esiteshini. Kodwa amakhowe (hhayi esekhulile zewayini, kanye nozakwabo zemvelo) - umkhiqizo okukhethekile ocebile amaprotheni ethize, amaminerali ayegcwele uyakwazi ukudala kwesigamu ishadi lesikhathi, kanye enzyme ukuthi umusa ukugaya evamile.
Lungiselela mushroom isobho uju agaric, okuyinto iresiphi liqukethe edingekayo amakhowe fresh kungenziwa ekheniwe usebenzisa analogs zabo, uma kahle kwangaphambilini ubageze ngamanzi abilisiwe futhi wabasebenzisa njengezinceku ezivamile, nje kuphekwe, amakhowe asanda kukhiwa. Noma kunjalo, namanje Kuyanconywa ukuthi ubilise imizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu futhi ukulungele ukuzumeka nokunye okufana nokolweni umhluzi aqotshwe anyanisi izindandatho. Ibila isobho uze ulungele ukuba okusanhlamvu. Ekupheleni, engeza izinongo kanye namakhambi oqoshiwe. Gcwalisa isobho nge ukhilimu omuncu noma ubisi abilisiwe. amagremu ayikhulu namashumi amathathu uju agarics kuyodingeka 3-4 wezipuni nokunye okufana nokolweni, omunye onion, isigamu inkomishi ubisi ezimbili wezipuni ukhilimu omuncu. Engeza usawoti kanye izinongo ukunambitha.
Kubantu abaphethwe ukuqunjelwa, Ngingaluleka ukupheka isobho uju agaric ukuvunwa ezimbonini. Okokuqala, kuyokusiza ukusungula izinkinga zesisu, futhi okwesibili, amakhowe - umkhiqizo nzima digestible, kodwa ngesimo a slurry, kuphephile. Futhi ungakhohlwa ngezimfanelo ukunambitheka kokudla. Ukungeza amakhowe isobho noma isobho, ungenza kubo elungisiwe nokunye nicer for gourmets. Zizwe ukhululekile ukuba ulinge - ukudla okumnandi njalo kuwusizo umzimba wethu, ngakho ke kungani bazitike isobho ozithandayo esimangalisayo esivela amakhowe zemvelo enongiwe izinkumbulo nostalgic yesikhathi esidlule.
Amasobho Georgian: zokupheka ngezithombe. isobho Georgian chikhirtma Inkukhu
Indlela ukupheka inkukhu isobho wonke umndeni?
Sorrel isobho nge Iqanda - izinguqulo ezimbili
Indlela engcono ukupheka isobho zucchini: no ayisikhilimu noma ngaphandle kwalokho kwanoma iyiphi imikhiqizo yobisi
I-VAZ-2106: ukumiswa kwangaphambili, ukubuyiswa kwayo nokulungisa. Ukushintshwa kwama-front suspension levers VAZ-2106
Izidakamizwa "Valvira": izibuyekezo odokotela
Ziyini izinzuzo ze-rtf-format?
Cheesecakes: kwasekuseni okumnandi